Nkosi, sifundise indlela yokuthandaza! - Christian Literature Fund
By CLF	All, Pamphlets, Prayer XHO175
UThixo wazi zonke izinto njengoMdali wethu. UBawo wethu wasemaZulwini uyazazi iimfuno zethu (Matewu 6:32). Xa kanti kunjalo, yintoni enyanzelisa ukuba sithandaze? Kona simele ukuthandaza kanjani? Kangaphi? Kona kona uyasiva uYehova xa sithandaza? Uyayiva na yona loo mithandazo yethu? Kule ncwadana sizama ukucamngca ngokufutshane kule mibuzo.
UThixo asimandla angemntu okanye abe uyindembelele njee ephezu kwamafu. UsiSiqu esiphilayo; unguBawo wethu okufutshane nathi. Uyasimema ke ngoko ukuba singene kulwalamano naye, elobuqabane nelabucala. Olu lwalamano ludaleka ngomthandazo. Aluze lube khona lona noThixo ngaphandle komthandazo. Ukholo lwethu ngaphandle kolu lwalamano luba lilize; uthando lwethu luyathunteka, yaye asinakukwazi nokwenza nombulelo wethu
UYehova wasidala sangabantu abahluke ngokuthe gca kwinxenye yendalo yakhe. Sithi kuphela thina bantu esanikwa isipho sokukwazi ukuthetha. Kungenxa yesi sipho apho uBawo wenza ukuba sibe nako ukwenza incoko naye; kungoko wasinika ukuba sive, siqiqe de siphendule namazwi akhe.
Kha ufanucinge xa sinokukwazi ukuliva ilizwi likaThixo, singanako nokumva naxa esibiza esilumkisa okanye esithuthuzela, okanye efuna ukusibonisa indlela eyiyo! Xa sinokubaza iindlebe sakuva nelo lizwi lisebezayo loMoya kaThixo. Singamva oPhezukonke ethetha nathi ngeendlela ezahlukileyo, sitsho sikwazi nokumphendula. Singakwenza oku xa sithandaza kuphela. Umthandazo sisixhobo esisisebenzisayo ukuphalaza ubunzulu bolangazelelo nemincili yeentliziyo zethu nolwazi lweengqondo zethu esiqinisekileyo ngalo. Yiloo ndlela ke kanye esithi singene encokweni noMdali wethu. Kungomthandazo kanye kanye apho sithi sibe nokufikelela ngaphandle nangaphezu kweziqu zethu. Yiloo nto eyenza ukuba umthandazo lo ubetha udlule noqhakamshelwano lwethu nabanye abantu, okanye nezo ncoko sithi sibe nazo neziqu zethu. Umthandazo lukholo olunemisebenzi. Uyabukhulisa ubomi bethu ngokwasemoyeni. Ubomi bethu bungangamampunge ngaphandle komthandazo.
Loluphi uhlobo esifanele ukuba sithandaze ngalo?
Zininzi iindlela zokuthandaza, yaye uhlobo ngalunye lunganyaniseka. Imithandazo, amaxesha amaninzi yenziwa ngamazwi nje alula nangentlonipho. Maxawambi, la mazwi atshiwo ngohlobo lwemihobe emyoli nevakala kamnandi ezindlebeni, ngeengoma zokudumisa okanye ngokwemisebenzi yobuchule emangalisayo. Ngeemini zangecawe xa sitsholoza sisonke sivuma ‘iindumiso, amaculo, neengoma zomoya’ (Kwabase-Efese 5:18-20, KwabaseKolose 3:16), kulapho siqonda mhlophe ukuba sizimisa emithandazweni sinqula, sibulela, sidumisa, sivuma sithi sixele nezono zethu, kananjalo sikhunga sizinikela.
Ngamanye amaxesha imithandazo le ithi ihlokome xa isihlwele sabantu sithandaza ndawonye emabaleni emidlalo, ingakumbi xa amalungu eqela elo lomthandazo edanduluka ngokuthandabuzisayo kwidolophu enkulu okanye encinane. Ngamanye amaxesha umthandazo lo uye uqabele ngaphaya kwamazwi aqhelekileyo, uve nje ngombefu othe zole! Isekwanguwo umthandazo xa umntu ethe cwaka phambi koThixo, eyedwa egumbini labucala.
Undoqo womthandazo womKrestu kukuba mawu-bhekiswe kuMdali wethu, yena yedwa (Duteronomi 6:4), uYehova ozenza aziwe sithi kwiTestamente eNdala enguThixo kaAbraham, kaIsake, noYakobi (Eksodus 3:14-15), kanti ke nakwiTestamente eNtsha aziwe enguBawo weNkosi yethu uYesu Krestu. Xa sinqula izithixo okanye imifanekiso eqingqiweyo okanye apho kumenywa khona izinyanya, namandla angaphezu kwawemvelo, neengcwele ukuba zilamle, akuze oku kuthatyathwe njengomthandazo womKrestu.
UThixo uyasimema ke ngoko ukuba masize kuye ngqo, nokokuba sikweyiphi na indawo, nangaliphi na ixesha xa sifuna. Singazisondeza kuye “ngentliziyo ethobekileyo nenengqinisekiso ezeleyo yokholo’’ (KumaHebhere 10:19-25), singene entendelezweni yesibingelelo esingcwele soMtriniti, asiphathe ngezandla zakhe zobubele esamkela eluthandweni nasebudlelwaneni babantwana bakhe, kuthungelwana noThixo oziqu zithathu emnye.
Xa sithandaza kuzo zozithathu ezi ziqu zikaThixo emnye, zithi zisihlangabeze ngentshukumo. UBawo wethu wasemazulwini owazi zonke izinto, ekukho phakathi kwazo iimfuno zethu, onqwenela yaye enako ukusinika esikudingayo, uyabiza esithi ‘’ Celani nophiwa; Funani nofumana; Nkqonkqozani novulelwa’’ (Luka 11:9). Xa sisiza kuye, sikwenza oku egameni leNkosi yethu uYesu Krestu, osiSiqu esinguNyana. Thina asifanele ukuvela phambi koYehova, koko uYesu wasivulela inyoba ngenxa yofefe nosindiso lwakhe. Kuye sinokuza ngokukhululekileyo, yaye size sinjengoba sinjalo. uNyana wesiNtu uhleli ngasekunene kuYise esithethelela, uyasicengela kuBawo atsho athandaze egameni lethu. Esesithathu isiqu, uMoya oyiNgcwele, uthandaza ngaphakathi kuthi, echaza kuBawo ezona mfuno zethu zintsokothileyo. NguMoya oyiNgcwele osifundisayo nosincedisayo ekuthandazeni kwethu (KwabaseRoma 8:26-27).
Sikufundela phi ukuthandaza? Incwadi yeeNdumiso
Ubukhulu becala apha eBhayibhileni sifumanisa ukuba uThixo uthetha nathi. Kodwa kwincwadi yeeNdumiso wenza ukuba siphulaphule abafazi namadoda bethetha naye, oko kukuthi, bonke aba bantu bathandaza kuye. Kungoko ke kwakumaxesha akudala abantu babesebenzisa iiNdumiso njengomthandazo. Babezicula, becamngca ngazo, ngokwenza njalo kubonakala ukuba yindlela abafunda ngayo, ukuthandaza. Kanti ke nakaloku nje ezi Ndumiso zise sesona “sikolo somthandazo’’ apho sinokufunda khona izifundo nje ezibini ezinomahluko ngendlela emasithandaze ngayo apha.
Esokuqala isifundo sesokwazi okokuba okwethu asikokuzigwagwisa sizama ukuzithandekisa kuYehova phambi kokuba eve imithandazo yethu.
Apha kwiiNdumiso kukho abo beza bekhala phambi koThixo, bekruthakruthana naye de bambeke amabala. Beza benoloyiko kunye nokubandezeleka kwabo, imisindo nezikhalazo. Babeka emthandazweni zonke izigqitho neziphoso zabo, namaxhala phambi kwakhe, bezohlwaya besithi: Nkosi yiba nemfesane ngakuthi, uze wenze ngetarhu usixolele izono zethu! Oku bakutsho bethethelela iKumkani nesizwe koPhezukonke. Kubakho nabo bantu abaculayo bengqiyaza phambi kwakhe, bebonga ubukhulu nokulunga kwakhe, okanye bazive befumana ukuphumla okufaniswa nokosana ebeleni likanina. Incwadi yeeNdumiso isifundisa okokuba singeza kuThixo sinjengoba sinjalo, sizandlale phambi kwakhe.
Esesibini isifundo seeNdumiso sesokuba singene kuko konke uMdali akuko, kwindyebo yakhe ebubungcwele, ukulunga nobulungisa, ufefe lwakhe neentsikelelo, uthando, ukhuselo nempatheko-ntle, konke ngomthan-dazo. Kulapho sifundayo ukuba ubawo usinika iintsikelelo xa sizithoba kuye sithandaza. Ngaphezu koko xa siguqa ngendololwane yena uzinikela kuthi ngokupheleleyo.
Umthandazo kuYesu Krestu ubuyinto ebisesizikithini sobomi nomsebenzi wakhe. Incwadi yeZibhalo isixelela okokuba ebezinika ithuba, ilixa nelixa, ethandaza. Uya-sithandazela nakaloku nje, uyasithethelela onke amaxa, siyicawe yakhe (Yohane 17, KumaHebhere 4:14-16).
Abafundi bakhe bamcela besithi: “Nkosi sifundise ukuthandaza” (Luka 11:1), waza wabafundisa umthandazo weNkosi (ungawuthelekisa nalowo ukuMatewu 6:9-13). Lo mthandazo umfutshane usikhokelela ebomini obulula obusisa kobo bendyebo, endaweni ebanzi. Usifundisa okokuba sazi nangaphezulu into yokuba wonke umthan-dazo awusililo ilinge nje lokuba simnyanzelise uBawo wethu enze intando yethu, ngokuba sisuka sitsho ngemilembelele yamazwi okanye amacebo obulumko bethu, okanye ngokuzigwagwisa. Emasikuqaphele- xa sithethela phantsi- kukuba sazi ukuba umthandazo awululo uluhlu lweminqweno neemfuno zethu nako konke okulunge nathi.
Izibongozo ezithathu zokuqala kumthandazo weNkosi zezo zibabaza udumo, uzuko nembeko efa-nele uBawo wethu. Esokuqala isibongozo sibonisa ukuba masingcwalise sihlonele igama lakhe. Esesibini sithetha ngobukumkani bakhe omabufike, bufikela ezintliziyweni zethu, nakwezabanye, kanti ke nakwilizwe elisingqongileyo. Esesithathu isibongozo sesokuba masili-phulaphule ilizwi likaYehova, sizithobe phambi kwentando yakhe. Ebunyanisweni ezi zibongozo zingumtya nethunga, azahlulwa. Ubukumkani bukaThixo buyeza, igama lakhe malingcwaliswe, intando yakhe masiyithobele.
Ezi zithathu zilandelayo izibongozo zimalunga nomntu neemfuno zakhe. Sifunda okokuba masithan-dazele iziqu zethu, sikhumbule ukubeka omnye nomnye. Sifunda ngendlela yokucela isonka sethu semihla ngemihla, ukuthandazela okokuba iimfuno zethu mazizalisekiswe. Kwakhona sifunda into yokuba masivume sixele izono zethu ukuze sicele uxolo kunye namandla okukwazi ukwabelana nabanye ngofefe noxolelo esithe salufumana. Esesithathu isibongozo kolu luhlu sisifundisa ukuthandazela ukuhlangulwa enkohlakalweni eza ngomtyholi. Usathana nequmrhu lakhe ubuthumile, uyasigrogrisa asihende, nto ke leyo ebonakalisa mhlophe ukuba thina bantu asomelelanga ngokwaneleyo ukuze sixhathise kule mimoya ingendawo. Kungeso sizathu ke apho sifunda ukuba uThixo ulihlathi uligwiba xa sithandaza, yaye sele eloyisile ihlabathi.
Lo mthandazo usifundisa ukuba sithandaze singaphezi kuBawo ongowethu sisonke. Umthandazo weNkosi usiquka sisonke xa siwuthandaza nabanye siyimbumba yabantwana bobawo omnye. Siwufundiselwa okokuba sithandazelane, omnye nomnye.
Ingaba uThixo uyayiva ayiphendule imithandazo yethu?
Ingaba umthandazo lo asimazwi nje athethwa emoyeni? Ingaba uThixo uyasiva nyhani xa sithandaza? Nyhani uYehova uyayiva imithandazo yethu? UYehova uyayiva imithandazo yethu! Kwiindawo ezininzi eBhayi-bhileni sifundiswa okokuba ngenene nangenyaniso uMdali wethu unguThixo ova izikhungo. Akasiphulaphuli aphendule kuba simsulwa, sikufanele oko, okanye kuba sihlangene kuyo indlu yakhe ngomthandazo. Hayi, akunjalo! UYehova uyasimamela ngenxa yokuba uNyana wakhe uYesu Krestu sele wayihlahla indlela, yaye uyasithethelela. Uyasiva xa sikhala kuye kuba oku sikwenza egameni layo iNkosi yethu. UMoya oyiNgcwele uthandaza uphakathi kuthi, uthandazela thina, uyeva kuba uyasithanda, asikhathalele kananjalo.
Ingaba uThixo uyayiphendula na imithandazo yethu? Usoloko esenza njengoko sicela na, ngelo xesha esicela ngalo na? Ewe, Owasidalayo, ngenxa yobubele bakhe, uthi kratya ngokusithi jize ngenceba yakhe xa sithandaza. Amaxesha amaninzi uThixo uyasinika esikucelayo, de enze ngaphezu kokucela nokuthandaza kwethu. Maxawambi wenza ngohlobo lwakhe esingalulindelanga, olusiphambayo. Oku kwenzeka kuba unguBawo wethu ozaziyo iimfuno zethu. Wazi ngaphezu koba sisazi okusifaneleyo. Kuko konke asinika kona, nokokuba kubonakala ngathi bubunzima, unathi ngalo lonke elo xesha, yaye inceba yakhe imi ngonaphakade, namandla akhe asanele. Kuhle ke ukuba sicele, siqhubeke nokucela, de sifumane impendulo yakhe.
Xa sithandaza iindlebe zethu masizibaze. Masizole sizinike ithuba lokuphulaphula sive akuthethayo uMdali wethu. Xa sithe sada sabe siyivile impendulo yakhe, masiyamkele sisazi ukuba zonke izintonezo zimbi na kakadesibe sinengqiniseko yokuba lowo usi-thandayo usebenzela okulungileyo kuphela kwabo bamthandazayo. Kungoko ke uThixo esimema okokuba siqhubeke sicela, sithembile okokuba uza kusinika impendulo. Okokuba akaphenduli ngoko nangoko nangokuthe ngqo ngokohlobo esicela ngalo, yena wazi banzi, esinceda ngokusinika ukuphumla kolu hambo lude luneengozi luneentshaba, kodwa masazi nto nye uyasinika impendulo.
Ingaba sithandaza ngokwaneleyo na?
Eneneni asithandazi ngokwaneleyo. Nasezi-nkonzweni zethu asenzi ngokufanelekileyo. Yiyo ke le nto izinto zisoloko zingasihambeli kakuhle ebomini bethu boku-khonza, nobo basecaweni. Sidinga ukuba siziqeqeshe ebomini bethu sibeke bucala ithuba lokuthandaza, sizingise siphaphamile emthandazweni. Sifanele ukuba sizinikeze nangaphezulu ixesha lokuthandazela uxolo kwilizwe lethu, nelo losasazo lweendaba ezilungileyo (KwabaseKolose 4:2, 1Timoti 2:1-7). Masithandaze lonke ixesha ngabanye, okanye Sisonke, sibetha ngaphaya kwemida yenkcubeko yethu, neyeemvaba ngeemvaba, ukanti ke naleyo yeelwimi zethu. Xa sivuka masithandaze, naxa silala, kanti ke nasebudeni bemini, sisendleleni, sisitya, sisebenza, sidlala. Singazuza lukhulu nangaloo mithandazo yethu isisigxina, sizincede nje ngokuthi sibe neendlela yokuyigcina. Ubomi bethu bubonke mabuphahlwe ngumthandazo, siziphakamise izandla zethu singenangqumbo nantandabuzo. Ubomi bethu besiqhelo mabungahlulwa emthandazweni; masithandaze singayeki, ntsuku zonke. Masithi sihleli nje, okanye sisebenza sibe sithandaza. Ngokwenjenjalo nto nento esiyenzayo, imizimba yethu, ulwalamano lwethu, ewe, ubomi bethu bubonke mabungqongwe ngumthandazo, sisazi okokuba senza idini kuBawo. Elo lidini lokuthandaza oluyichulumancisayo intliziyo yakhe, ngokungathi ngumnikelo wesiqhumiso esivumba limyoli.